Monday November 12, 2018 - 18:58:59 in Wararka by Warsheekh Muqdisho
Xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta ka dooday ku noqoshada miisaaniyadda dowladda 2018 oo ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda.
Kulanka oo uu shir guddoominaayay guddoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka mudane Mahad Cabdalla Cawad ayaa waxaa soo xaadiray 148 xildhibaan.
Xildhibaanada golaha shacabka ayaa dood dheer ka yeeshay ku noqoshada miisaaniyadda, xildhibaanada ayaa soo bandhigay talooyin ku saabsan noqoshada miisaaniyadda iyo meelaha u baahan sixitaanka.
Sidoo kale xildhibaanada qaar ayaa soo jeediyay in si deg deg ah lagu ansixiyo ku noqoshada miisaaniyadda 2018 oo ay ku jiraan xuquuqda iyo mushaarka ciidamada dowladda.
Wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya mudane C/raxmaan Ducaale Bayle ayaa xildhibaanada ka codsaday in la ansixiyo.
Dood dheer iyo dhageysi talooyinka xildhibaanada ka dib waxaa guddiga maaliyadda la faray in ay ka soo shaqeeyaan arrintaan, kana soo dhigaan qaraar, golaha shacabkana usoo gudbiyaan maalinta Arbacada.
Guddoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka mudane Mahad Cabdalla Cawad ayaa sheegay in golaha shacabka uu arrintaan ku wareejiyay guddiga maaliyadda si loogu soo dhigo qaraar.
" Wasiir anagu waxan ansixinaa qaraar uu guddi soo diyaariyay, hadaba deg degta jirta awgeed guddiga maaliyadda iyo miisaaniyadda inoogu xil saran waxan ka rabnaa iney arrinkaan ka soo shaqeeyaan oo ay noo keen Arbacada si golaha uu u ansixiyo qaraar cad oo dhan walbo laga soo diyaariyay”. ayuu yiri guddoomiye Mahad.
Dhanka kale wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed C/llaahi Salaad " Oomaar” ayaa xildhibaanada golaha shacabka ka hor aqriyay xeerka hay’adda duulista rayidka iyo saadaasha hawada.
Wasiirka ayaa sheegay in xeerkan uu muhiim u yahay dalka wax badan oo hormar ahna laga gaari doono hadii golaha shacabka ay ansixiyaan.
"Hindise sharciyeedkan waxa uu aas aas u yahay hay’adda duulista rayidka Soomaaliyeed waa muhiim in si wadajir ah loogu shaqeeyo si caalamka aan ula tartan”. Ayuu yiri wasiir Oomaar.